Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 18
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 18
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 18
Jesu anotaura pamusoro pemukadzi anoramba achimanikidza mutongi kuti amuyananisire. Pakupedzisira mutongi akati
RUKA 18:5 Iyi chirikadzi zvainonditambudza ndichairuramisira; kuti irege kuzovuya pashure indirove kumeso.
6 Ishe akati: inzwai zvinorebwa nemutongi asakarurama.
7 Ko zvino Mwari haangaruramisiri vasanangurwa vakasanangurwa vake, vanodanidzira kwaari masikati novusiku, kunyange achinonoka pamusoro pavo here?
Saka kushingirira chinhu chinodiwa matiri naJesu.
LUKE 18:8 Ndinoti kwamuri uchakurumidza kuvaruramisira. Asi Mwanakomana womunhu kana achisvika uchawana kutenda panyika here?
Jesu paachavuya, achawana kutenda here? Kwete kuzhinji. Iri ndiro rimwe reMagwaro anosuwisa kwazvo.
Vashoma kwazvo vanotenda kuBhaibheri. Vanhu vanofadzwa kwazvo netsika dzemakereke avo nedzidziso dzakaitwa nevanhu.
Zvino Jesu anotaura pamusoro pevanhu vaviri vachinamata.
RUKA 18:9 Wakareva vo mufananidzo uyu kunavamwe, vakanga vachizvitenda vachiti takarurama, vachizvidza vamwe akati:
10 Vanhu vaviri vakakwira kutembere kundonyengetera, mumwe ari muFarise, mumwe ari muteresi.
11 MuFarise akandomira, akanyengetera kudai, achizvireva akati: Ndinokutendai Mwari, kuti handina kufanana navamwe vanhu, makororo vasakarurama, mhombwe, kana nomuteresi uyo.
12 Ndinozvinyima zvokudya kaviri neviki; ndinopa chegumi chezvose zvandinazvo.
Mwari haafadzwi nesu kana tichimuudza kuti takanaka sei. Mwari haafadzwi nevanhu vanozviruramisira.
RUKA 18:13 Asi muteresi wakamira kure, asingade kunyange nokutarira kudenga akazvirova chifuva akati: Mwari ndinzwirei tsitsi ini mutadzi!
14 Ndinoti kwamuri: Uyu wakaburukira kumba kwake aruramiswa kupfuvura uya. Nokuti muMwe nomumwe, unozvikudza, uchaninipiswa, nomumwe nomumwe unozvininipisa uchakudzwa.
Mwari anofadzwa chete kana tikazvirevurura pachena zvivi zvedu nekudarika kwedu.
Mwari anofunga zvakasiyana nezvatinofunga. Kana tichifunga kuti takanaka, anotideredza kusvika pachinzvimbo chatakafanira.
Kana tikabvuma kuti hatina maturo, anotibatsira tisimuke.
RUKA 18:15 Zvino vakavuya navacheche vo kwaari, kuti avanyangate; asi vadzidzi vakanga vachizvivona vakavarayira.
16 Ipapo Jesu akavadanira kwaari, akati: Regai vana vaduku, vavuye kwandiri, musavadzivisa, nokuti vushe bwaMwari ndobwavakadai.
17 Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Aninani usingagamuchiri vushe bwaMwari somwana muduku, haangatongopindi mabwuri.
Panguva yekupedzisira, vana vanofanira kudzoserwa pakutenda kwemadzibaba avo mapostora. Isu vana tinofanira kudzokera kuna Jesu, Shoko raMwari. Mwana muduku ane kutenda kwakazara muna baba vake kuti vanomuchengetedza, vanomutungamira uye vanomupa zvaanoda. Mwana muduku haadi kuteerera vamwe vanhu vose. Saka isu sevana vaduku pamweya venguva yekupedzisira hatidi humwe hutungamiri kukunda hwatakanyorerwa nemadzibaba edu mapostora muTestamente Itsva.
LUKE 18:18 Zvino mumwe mukuru wakamubvunza, akati: mudzidziso wakanaka, ndingaiteiko kuti ndigarenhaka yovupenyu bwusingaperi?
19 Jesu akati kwaari: unondiidzireiko wakanaka? Hakuna wakanaka, asi mumwechete, iye Mwari.
Vanhu musanganiswa wezvakanaka nezvakaipa. Mwari ega ndiye akanaka. Saka nekudaidza Jesu kuti “wakanaka”, munhu uyu aibvuma kuti Jesu ndiye Mwari.
Munhu uyu aive akachengeta gumi remitemo.
LUKE 18:22 Zvino Jesu achizvinzwa akati kwaari: unoshaiwa chinhu chimwechete; tengesa zvose zvaunazvo, upe varombo, uve nefuma kudenga; ugovuya unditevere.
23 Zvino wakati achinzwa izvozvo, akabatwa neshungu kwazvo; nokuti wakanga ane fuma zhinji.
24 Zvino Jesu achimuvona akati: vane fuma vacharemerwa sei kupinda muvushe bwaMwari.
25 Nokuti kamera ingarerukirwa kupinda pavuri rorunji, kumufumi kupinda denga.
Zvakare, Jesu akabva atema chaipo pachinhu chekuti pfuma hachisi chinangwa chedu chekuva panyika. Mupfumi haangasiye pfuma yake. Anosarudza mari pachinzvimbo chaMwari.
Tinogona chete kupinda denga nekuisa Jesu pamberi muhupenyu hwedu. Vakapfuma vanoisa mari yavo. Saka mari chipingaidzo uye chikanganiso panzira yavo yekupinda Denga. Ndapota musafurirwe nedzidziso yebudiriro. Makomborero aMwari chaiwo ndeemweya.
Chinangwa chaMwari pakurarama kwedu ndechekutidzosera kudzidziso dzeTestamente Itva, kutenda kwavapostora.
RUKA 18:26 Zvino vakanga vazvinzwa vakati: Ndiyaniko ungagoponeswa?
27 Iye akati: Izvo zvisingabviri kuvanhu, zvinobvira kunaMwari.
Saka Mwari oga ndiye anokwanisa kutiponesa, asi kana tamuita wekutanga chete.
Petro anoratidza pamusoro pekusiya zvose kuti titevere Jesu.
LUKE 18:28 Ipapo Petro akati: tarirai Isu takasiya zvose, tikakuteverai.
29 Akati kwavari: zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Hakunomunhu wakasiya imba, kana mukadzi kana vanun’una, kana vabereki, kana vana, nokuda kwovushe bwaMwari,
30 Usingazopiwi zvizhinji kuna izvozvo nenguva ino, vuye vupenyu bwusingaperi nenguva inouya.
Tinofanira kuzvipira kusiya mhuri dzedu nekuda kwaMwari. Ndiye anofanira kuva rudo rwedu rwekutanga, kwete chero munhu watinozotizirawo kwaari tapererwa.
Mubairo wedu mukuru uri Kudenga. Asi panyika tinowanawo zvakare muripo. Pano tinofanira kungwarira kuti hatizongofungi pamusoro pemubairo wezvinhu zvinobatika. Nekuvhura maziso edu kune zvakavanzika zvakavanzwa mushoko, Mwari anenge achitipa chipo chemweya chinoshamisa. Asi kazhinji, tinosarudza mubairo wezvinhu zvinobatika kukunda mibairo yemweya. Tinofanira kusiya Mwari atiitire zvaanoona zvakakodzera.
Ruka anotsanangura kuonazve kwakazoita munhu aive bofu. Uyu mufananidzo wemumwe nemumwe wedu tichizokwanisa kuona zaruriro yezvirevo zveMagwaro.
RUKA 18:35 Zvino wakati aswedera Jeriko, rimwe bofu raigara panzira richikumbira;
36 Rakanzwa vanhu vazhinji vachipfuura, rikabvunza richiti: Chinyiko?
37 Vakarivudza vachiti: NdiJesu weNazareta unopfuvura.
Ipapo rakadanidzira richiti: Jesu Mwanakomana waDavidi; ndinzwirei ngoni!
39 Zvino vakanga vakatungamira vakariraira kuti rinyarare; asi rakanyanya kudanidzira richiti: Mwanakomana waDavidi ndinzwirei ngoni!
Mwanakomana waDavidi ndiro richave zita raJesu panguva yeMereniyamu ari Mambo. Bofu raive rakarasika paruzivo rwaro rweMagwaro, saka Jesu aisakwanisa kumubatsira. Jesu aive asingafadzwe nechinhu chekuti munhu aive nezvaanoziva muShoko . Jesu akadzikisirwa nechinhu chekuti munhu uyu aive asina kunzwisisa Magwaro.
RUKA 18:40 Zvino Jesu wakamira, akaraira kuti vavuye naro kwaari rikati raswedera: akaribvunza;
41 Achiti: Unoda kuti ndikuitireiko? Rikati: Ishe kuti ndivone.
Apa akadaidza Jesu kuti “Ishe”, zvaive zvakanaka. Saka Jesu aive okwanisa kumubatsira.
RUKA 18:42 Jesu akati kwariri: Chivona, kutenda kwako kwakuponesa.
43 Pakarepo rikavona, rikamutevera richirumbidza Mwari. Vanhu vose vakati vachizvivona vakakudza Mwari.
Tinoda meso edu emweya- kukwanisa kuona kuti Bhaibheri riri kurevei.
Chidzidzo ndechekuti tinofanira kugona kuona zvinoreva Bhaibheri zvakajeka, kwete kuzvipindurudza. Kana mukaona tsananguro yeBig Bang kuna Genesisi Chaputa 1, munenge muri mapofu kune zvinotaurwa neBhaibheri.
Big Bang inotaura kusika kuchitanga nekupenya kwechiedza pakuputika kunobuditsa nzvimbo nenguva. Uku kufungidzira sezvo kusina anoziva kuti nguva chi, uye kuti yakasikwa sei. Hakuna kumwe kuputika kunozivikanwa kwakambosika nguva.
Asi kusika muBhaibheri hakuna kutanga nekupenya kwechiedza.
Genesisi inotanga naMwari achitanga asika denga nenyika pakutanga. Hakuna nguva yakataurwa sezvo Mwari aive achiri kushanda nekusingaperi kusina nguva. Zuva, mwedzi nenyeredzi zvese zvakaitwa pakutanga. Nyika yaive yakafukidzwa nemvura, yakapwa ichinoita gore dema. Pasi pegore dema iri paive nerima pamusoro pemvura dzakadzika. Zuva raive ritoripo pamusoro pegore dema. Gore rakamisa zuva kusvika pachiso chenyika. Mwari achibva atanga kufamba.
Mwari akataura akati “Chiedza ngachivepo”. Shoko rakataurwa rakaparadzira gore dema panyika kuti chiedza chezuva chirove chiso chenyika. Nyika yakabva yaona chiedza chezuva chinoyevedza kekutanga. Iri raive zuva rekutanga, Svondo, pakatanga Mwari kutaura nguva pane zvaaiita.
Munhu iguruva. Saka Mwari anoshanda nesu sezvaakaita nenyika.
Pakutanga taive takafukidzwa mumvura mudumbu raamai vedu. Asi paivewo negore dema rekusatenda rakaputira mweya yedu, ndicho chikonzero nei takaberekerwa muzvivi. Zvino imwe nguva inozouya muhupenyu hwedu Mwari anotaura, kana isu tikatenda tikatendeuka, kusatenda kwakaputira mweya yedu kunoparadzwa, chiedza cheShoko raMwari kekutanga chinokwanisa kusvika pamweya yedu. Ipapo ndipo patinokwanisa kufara mukurumbidza chiedza cheMwanakomana waMwari, toona kuti Muponesi anoshamisa zvakadii. Asi kubva pakuzvarwa kwedu aingovapo ari Muponesi. Kungori kuti kana tikatendeuka ndipo patinokwanisa kuona chinhu ichocho kekutanga. Zvino hupenyu hwedu hutsva, sevana waMwari, hunotanga ipapo patinotanga kufamba muchiedza cheShoko raMwari.
Kugona kuona Shoko raMwari rakaziviswa ndihwo humbowo hukuru hwekuti, semunhu aive bofu, aive pamberi paKristu, anokwanisa kutishandura kubva pakusatenda kutiita vatendi.